Amabhande okuhambisa Ibhande elihambayo liyindlela yokuthwala yohlelo lokuhambisa ibhande (okuvamise ukufinyeziselwa ukuhambisa ibhande). Uhlelo lokuhambisa ibhande lungenye yezinhlobo eziningi zezinhlelo zokuhambisa. Uhlelo lokuhambisa ibhande lunamapulile amabili noma ngaphezulu (kwesinye isikhathi abizwa ngokuthi izigubhu), aneluphu engapheli yokuphatha okokusebenza — ibhande elihambayo — elizungezayo ngabo. Okukodwa noma womabili ama-pulleys anikwe amandla, ahambisa ibhande nezinto ezisekubhanleleni phambili. I-pulley enamandla ibizwa nge-drive pulley whil ...
Rubber Stator Futhi Rotor Of Flotation Machine
I-stator ne-Rotor, ikakhulukazi esetshenziselwa umshini we-flotation we-XJK chungechunge, uchungechunge lwe-XF, uchungechunge lwe-SF, uchungechunge lwe-BF, uchungechunge lwe-KYF, uchungechunge lwe-XCF, uchungechunge lwe-JJF, uchungechunge lwe-BS-K. I-Rotor ne-stator yomshini we-flotation ikakhulukazi yenziwe ngokufakwa kwamathambo wensimbi nenjoloba engagqoki. Ukufakwa kwamathambo ensimbi kwenziwa ngokusika okuthuthukile kwamalangabi bese kushiselwa ngokunembile ngaphansi kwamazinga wenqubo eqinile. Ukusebenza kwamandla nokulinganisela kokufakwa kwamathambo kuqinisekisiwe ngokulinganisa ukutholwa nge ...
Ukufakwa kwe-Hydraulic & Coupling Quick & Adapter e-Staple-Lock ne-Hydraulic Rubber Hose
I-Staple & lock adapters I-Arex igxile ekufezeni ukugqama ekwakhiweni, ekwenziweni nasekuhlinzekelweni kwezixazululo zokuhambisa uketshezi, izingxenye kanye nemishini ehambisanayo yezicelo zokucindezela okuphezulu. Kuhlanganiswe ngaphakathi kwalokhu, zingcweti, abakhiqizi bama-adaptha ayisisekelo namavalvu ebhola asetshenziswa kakhulu emisebenzini yezimayini ezingaphansi komhlaba. Ukuxhumana okuyisisekelo kuyingxenye ebalulekile yesifunda se-hydraulic ezimayini futhi kunerekhodi eliqinisekisiwe lokuthi liyindlela engcono kakhulu ye-c ...
Onke amaphedi ethu aklanyelwe abasebenzisi bokugcina ezingqondweni zethu, kugxilwe ekubekweni kwekhwalithi nokukhiqiza. Amaphrofayli ama-pads kufanele alingane kahle isicathulo sakho somkhondo ukuze uvimbele ukunyakaza okungadingekile okungaholela ekuqongeleleni kwemfucumfucu, okungaletha izingcindezi kumaphakethe akho okunikeze ukuqina okungcono. Ukulingana okuphelele futhi kusho umsindo osebenzayo othulile. Sinikezela ngamapayipi wethrekhi yensimbi namaphayiphu wethrekhi enjoloba amaklayenti asebenzisa, anokukhulu ukumelana nokugqwala nokumelana nokugqwala ...
Polyurethane Stator Futhi Rotor Of Flotation Machine
I-stator ne-Rotor, ikakhulukazi esetshenziselwa umshini we-flotation we-XJK chungechunge, uchungechunge lwe-XF, uchungechunge lwe-SF, uchungechunge lwe-BF, uchungechunge lwe-KYF, uchungechunge lwe-XCF, uchungechunge lwe-JJF, uchungechunge lwe-BS-K. I-stator ne-rotor yizinto ezisemqoka zomshini we-flotation, ezisetshenziswa kakhulu ekusizeni izinsimbi noma okungezona izinsimbi. I-polyurethane stator ne-rotor kungolunye uhlobo lwezikhala zokumelana zomshini we-flotation ezinezakhiwo eziningi, njengoba i-polyurethane inamandla amakhulu njengepulasitiki nokunwebeka okuphezulu njengerabha. Ukulungiswa kwempahla ekhethekile ...
Kwenziwe ngentando Rubber & Plastic Imikhiqizo
Ukucutshungulwa komkhuba wenjoloba nemikhiqizo yepulasitiki Inqubo ejwayelekile yokwenza umkhiqizo wenjoloba njengoba ungezansi https://www.arextecn.com/uploads/66f24654.mp4 Raw material-mixing-roll extrusion-molding and vulcanization-shape up Ubuciko obuhlukile bokucubungula ipulasitiki izinto njengoba ngezansi Injection udini; (izingxenye zepulasitiki ngobuningi) Blow molding; (amabhodlela epulasitiki) Ukuthathwa kwepulasitiki; (ifilimu eplastikhi ebunjiwe) Ukukhishwa; (ipayipi lepulasitiki) Isipiliyoni sokusebenza Sithuthukisa imibono yakho ukuthi igcwaliseke ngaphakathi kwe-experiment ...
Hlunga Izingxenye Zomshini Wokucindezela
Imboni ye-AREX inikeza uhla lwezinto zokuhlunga zokuhlunga ukunweba ukuguquguquka kohlelo lwakho lokucindezela isihlungi. Isihlungi somshini wokucindezela usetshenziselwa umsebenzi wokwehlukanisa oketshezi / oqinile. Izihlungi zengcindezi zisebenzisa ukuhlunga ingcindezi ukwehlukanisa uketshezi nokuqina, lapho i-slurry ifakwa kumshini wokuhlunga bese iphelelwa amanzi ngaphansi kwengcindezi. Ngokuyinhloko, isihlungi ngasinye sabezindaba senzelwe ngosayizi nohlobo lwesilayidi esidinga ukomiswa. Izinto ezine eziyinhloko zomshini wokuhlunga zifaka phakathi ...